ताइवानमा आक्रमण गर्न चीन अन्तिम तयारी गर्दै, विश्वभर तरङ्ग, के गर्ला ताइवान ? — Imandarmedia.com
ताइवानमा आक्रमण गर्न चीन अन्तिम तयारी गर्दै, विश्वभर तरङ्ग, के गर्ला ताइवान ?
एजेन्सी। ताइवानका रक्षामन्त्री चिउ कुओ–चेङले चीनको आक्रामकताविरुद्ध ताइवान हरेक समय तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्ने प्रविधि र प्रणाली तिव्र रुपमा विकास गरिरहेकाले ताइवानले लामो दुरीमा मार हान्नसक्ने क्षेप्यास्त्र तथा अन्य हतियार तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
केही समय अगाडि मात्र ताइवानले पाँच वर्षको अवधिमा अमेरिकाबाट ९ अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा क्षेप्यास्त्र लगायत अन्य हतियार प्राप्त गर्ने भनिएको छ। प्रस्तावमा समुद्री सिमानामा चीनबाट गम्भीर खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ। उनले सोमबार अमेरिकाबाट प्राप्त हुने हतियार लामो दुरीसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने, सटीक र बोक्न मिल्ने हुने बताएका छन्।
यस्ता हतियारले ताइवानका सेनालाई चाँडै तयार हुन मद्दत पुग्ने बताइएको छ।पछिल्ला दिनहरुमा चीनले ताइवान कब्जा गर्ने ढाँचाका युद्ध अभ्यासहरु गरिरहेका छन्। चीनका युद्धक विमानहरु ताइवानको हवाई क्षेत्रमा बिना अनुमति घुस्ने गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवान चीनको हिस्सा भएको र ताइवान चीनबाट अलग्याउन कसैले नसक्ने बताउने गर्दछन्।
उनले ताइवान अलग्याउन चाहने शक्तिबाट खतरा भएको बताउँदै आफ्ना सेनालाई हरेक समय युद्धको लागि तयार हुन भनेका छन्।ताइवानले भने आफू चीनको हिस्सा नभएको बताउँछ। झनै ताइवानले अमेरिकाबाट हतियार खरिद गरेर आफूविरुद्ध तैनाथ गर्ने भनेपछि चीन थप रुष्ट छ।
चीनको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध तयार हुन ताइवानको पाँच दिने युद्ध अभ्यास
चीनबाट आक्रमण हुनसक्ने भन्दै ताइवानले पाँच दिने ‘वार गेम’ युद्ध अभ्यास सोमबारदेखि सुरुवात गरेको छ। ताइवानले सुरुवात गरेको युद्ध अभ्यास यस वर्षकै महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि हो। ‘हान क्वाङ’ नाम दिइएको यस पाँच दिने युद्ध अभ्यास ताइवानका शीर्ष अधिकारीहरु अमेरिकामा सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्न गएको भोलिपल्ट भएको हो।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबाट आक्रमण भए कसरी त्यसको प्रतिकार गर्ने भनेर युद्ध अभ्यास भइरहेको हो। चिनियाँ पक्षले आक्रमाण गरेको खण्डमा सेनाहरुलाई आफ्नो लडाई क्षमता रक्षा गर्न सिकाइनेछ।चीनले गर्नसक्ने हवाई आक्रमण, जल तथा थल आक्रमणका साथै बायो–केमिकल आक्रमणविरुद्ध ताइवानले आफ्नो सेना तयार गरिरहेको हो।
पश्चिम ताइवानदेखि जियासान बेससम्मबाट युद्धक विमानहरु उड्नेछन्। यी विमानले चीनको आक्रमणलाई रोक्ने कार्यको अभ्यास गर्नेछन्। एससीएमपीका अनुसार युद्ध अभ्यासमा मिराग–२००, एफ–१६ भी, इ–२के एअरबर्न तथा पी–३सी पनडुब्बीविरुद्धको युद्धक विमान युद्ध अभ्यासमा समावेश हुनेछन्।
जिसान बेस हुवालिनको पहाड मुनी निर्माण गरिएको छ। यहाँ २ सय युद्धक विमान राख्न सकिन्छ। ताइवानका सेनाले राति पनि चीनबाट आक्रमण हुनसक्ने भन्दै युद्ध अभ्यास गर्नेछन्।बुधबार युद्धक विमानहरुलाई आकस्मिक रुपमा अवतरण गर्न सिकाइनेछ।
चीन ताइवानलाई आफ्नो भूमि भएको बताउँछ र जहिल्यै भएता पनि ताइवान चीनमै विलय हुने त्यहाँको राष्ट्रपति सी चिनफिङले बताउँदै आएका छन्। चीनबाट अलग्गिन खोजे ताइवानलाई आक्रमण गरेरै कब्जा गर्ने चीनको भनाइ छ। पछिल्लो समय चीनको आक्रामक गतिविधि ताइवानमा थप बढेको देखिएको छ।
तर ताइवानले चीनको नीति त्यहाँ नचल्ने र आफू एक सार्वभौम मूलुक भएको बताउने गर्दछ। चीनको खतरासँग जुध्नको लागि भन्दै ताइवानले अमेरिकाबाट हतियारहरु खरिद गरिरहेको छ जसले चीनलाई चिढ्याएको छ। चीनले गत वर्षदेखि ताइवानमाथि आफ्नो आक्रामकता बढाएको छ। पछिल्लो समय चीनले दोहोर्‍याउँदै चिनियाँ युद्धक विमानहरु ताइवानको हवाई क्षेत्रमा घुस्ने गरेका छन्।
बेइजिङले कुनै न कुनै बेला यो टापुलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभिछाड्ने बताएको छ। पछिल्लो समय यस टापु फिर्ता लिन चीनले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। तर ताइवानले आफू स्वतन्त्र मूलुक भएको अडान छाडेको छैन। त्यहाँ चीनको नीति लागू नहुने ताइवानको भनाइ छ। त्यसकारण हालका वर्षहरूमा सो क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ। ताइवानले पनि चीनको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध युद्ध अभ्यास गरिरहेको हो।